Shina sarontava azo ampiasaina ho an'ny ankizy mpamokatra sy mpamatsy kidoro - Dongguan FUYA METAL & Products Plastika Co., Ltd.
Home > Products > Facemask > Sarontava azo ampiasaina ho an'ny ankizy
â € ¢ Marika: FU YA
â € ¢ Modely: sarontava ho an'ny ankizy FUYA
â € ¢ Function: anti-smog, anti-dust and anti-bacteria
Fitaovana: Silica gel, PP, PC + ABS
â € ¢ Loko: Sarontava
â € ¢ Mpanamboatra: Dongguan Fuya Hardware plastic Products Co., LTD
â € ¢ Azo ampiharina amin'ny: ankizy
â € ¢ Fitsipika fiarovana: fenitra China GB / T 32610
â € ¢ Haavo fiarovana: A
Ny endrika amam-borona dia azo andrahoina, gel silica tsy tia hoditra, aorian'ny fiakanjoana dia tsy hanana ny fahatsapana burr, ny hatsembohana dia tsy mahazo ny mahazo aina amin'ny fifikirana amin'ny hoditra.
Miaraka amin'ny vent roa heny dia afaka mamoaka etona rano haingana kokoa izy ary miaina milamina kokoa.
Famolavolana ny fiarovana ny singa sivana, afaka mampihena ny fandotoana mivantana ny singa sivana, miaraka amin'izay koa, afaka manadio ny sarontava, manalava ny fampiasana ny fahanton'ny singa sivana!
** Volavola maivana indrindra, tsy matahotra fitsembohana mora sy fanazaran-tena betsaka ho an'ny mpianatra sy ny ankizy, mety amin'ny akanjo lava.
Soso-kevitra momba ny fampiasana sarontava:
Akorandriaka sy singa - manadio matetika na mamono otrikaretina alkaola ny tampon'ny sarontava.
Sivana fanivanana - asaina manolo isaky ny 3 ka hatramin'ny 7 andro. Esory ny singa sivana taloha ary ario. Avy eo sasao amin'ny rano ny sarontava ary soloina singa sivana vaovao.
Hot Tags: Sarontava azo ampiasaina ho an'ny ankizy, Sina, mpamokatra, mpamatsy